ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း နှင့် သူ၏ ချစ်သူများ အကြောင်း ~ အလွမ်း မင်းသားလေး
09:43 နေဇော် လင်း No comments
(အလွမ်းမင်းသားလေး သူငယ်ချင်းများ အပျင်းပြေဖတ်ရန်အတွက် ဝထ္တုတိုလေးပါဗျာ)
မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ လက်ညောင်းခံ ရေးထားတာမို့ အားပေးပြီး ဖတ်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်ဗျာ.
ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းများ နှင့်သူ၏ ချစ်သူများ အကြောင်း
ဥသြ...ဥသြ..ဥသြ...ဆိုတဲ့တေးသီသံနဲ့အတူ..နွေလေရူးလေးတွေလွင့်လာတဲ့အချိန်မှာ ဟိုးဝေးဝေးကမြင်ရောင်နေဆဲ အတိတ်ပုံရိပ်ကလေးဟာ အသစ်မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ....
အဲလိုဆိုရင်အခုလိုနွေခေါင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ ရာသီမှာ ကျွန်တော်အလွမ်းတွေ ဘယ်နားသွား ထားရမှာလဲ ..ဘယ်နားထားရမှာလဲအဖြေမပေးပါနဲ့ဗျာ....
ကျွန်တော် စိတ်ပြေလက်ပျောက် အလုပ်ပိတ်ရက်လေးမှာ ရှေ့ကမီးရောင်လင်း ထိန်ထိန်အောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့စိုင်းဝေ ဂစ်တာတီးပြီလွမ်းသံ ညဉ်းနေတဲ့အချိန်မှာ................
ဟေးးးးးးးးး....လို့ခေါ်သံနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်မောင်တစ်ယောက် ညိုးငယ်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရှိရာ
"သူငယ်ချင်း ငါပြောစရာစကားတစ်ခုရှိတယ်ကွာ ။ဂစ်တာလေးဘေးချထားလိုက်ပါ".
အဲဒီအချိန်မှာ စိုင်းဝေက"ဘာလဲပိုက်ဆံချေးမလို့လားဟေ့ရောင်"..ပြောင်ချော်ချော်မျက်နှာနဲ့ မောင်မောင် ကိုစလိုက်တယ်.."
"မဟုတ်ပါဘူးကွာ" စိုင်းဝေက"ဒါဖြင့်မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲံ မျက်နှာလဲမကောင်းပါလား"လို့မေးလိုက်တယ်..
စိုင်းဝေက"သြော်....မင်းအသဲပြဲလာတာကိုး"ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့စိုင်းလင်းက" အာ....မင်းကလဲံ အသဲကွဲတယ် လုပ်ပါကွာ.." "သူငယ်ချင်းမောင်မောင် မင်းအမှန်တိုင်းပြောကွာ ဘာဖြစ်လာတာလဲံ..... စိုင်းဝေမင်းမနောက်နဲ့ သူပုံကြည့်ရတာ တော်တော်ဂွမ်းလာပုံရတယ်": ဟေ့ကောင် ဘာဖြစ်လာတာလဲ...? မပြောချင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းရာ"အဲဒီအချိန်မှာ စိုင်းဝေက စိတ်မရှည်သလိုနဲ့..
'ဒီမှာဂစ်တာတီးရတာ feel ပျက်တယ်.."ကျွန်တော်က
:"ဟေ့ရောင် စိုင်းဝေ မင်းအသာနေစမ်းပါ"
"မောင်မောင် မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲံပြော သူငယ်ချင်း"
မင်းသိပါတယ်သူငယ်ချင်းရာ" ငါကမ်ိန်းကလေးတွေကိုရင်မခုန်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ"
":ဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငါ့ကိုရင်ခုန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ငါတွေ့ထားတယ်"
:"အေးငါသိတဲ့ အကြောင်းတွေတော့ဟုတ်ပြီ...."မင်းရင်ထဲမှာ တွေ့နေတာ ဘယ်လောက်များလဲ ငါသိပါတယ်
တစ်ချိန်က ဘယ်မိန်းမကိုမှရင်မခုန်ပါဘူးဆိုတဲ့ မင်းက အခုတော့ မင်းထားခဲ့တဲ့ ရည်းစားတွေကို ရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ငါ့ရဲ့လက်ဆယ်ချောင်းတောင် မလောက်လို့ စိုင်းဝေဆီကတောင်ငါငှားနေရတယ်"
အေးငါပြောမယ်...အခုမင်းချစ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေက မင်းကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထားသွားမယ်ဆိုရင် မောင်မောင်မင်းပဲ ခံစား၇မှာနော်."
"စိုင်းလင်း ဒေါသထွက်သော လေသံဖြင့်ပြောလိုက်မိတယ်"
ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ... ဟိုအရင်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိန်းကတွေအတွက်နဲ့ ဒီလောက်ထိ ခံစားရလိမ့်မယ်လူို့ ဘယ်တုန်းကမှမမျှော်လင်မိခဲ့ဘူးဗျာ.
ညဆိုရင်လဲ e.mail တွေပို့လို့ အိပ်ရေးပျက်တာကလဲ ရက်ပေါင်းမနည်း"
သူရဲ့ချစ်သူတွေအတွက်နဲ့ အပင်ပန်းခံ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်ပါစေ.. ဂရုမစိုက်တက်တော့တဲ့ အချိန်တွေ တောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်"
ကျွန်တော် အိပ်ချင်စိတ်မပျောက်သော လက်တစ်စုံက ဟမ်းဖုန်းလေးရှိရာသို့ရောက်သွားပြီ "
အခုပြောနေတာ ကိုစိုင်းလင်းလား မသိဘူးရှင့်"
သူမရဲ့ငိုရှိုက်သံတွေက. ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲသို့တားဆီးမှု့ကင်းစွာ ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်"
"ကျွန်မရဲ့မိဘတွေက သူတို့သဘောတူတဲ့ သဘောင်္သားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်ရှင်"
"ကျွန်တော် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုမပြုတ်ကျမိအောင်ကိုပဲစုပ်ကိုင်မိလိုက်တယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်က မောင်မောင် ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေလဲ အခုလိုပဲ မောင်မောင်ထပ်သာ တဲ့သူတွေနဲ့ ပါသွားတာများလို့... သူငယ်ချင်း မောင်မောင်ကို..သနားမိတယ်ဗျာ"
အရင် ရင်က အသဲကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းမောင်မောင် တစ်ယောက် အခုတစ်ခါလဲ မရှိတော့တဲ့အသဲကို ထပ်ကွဲဖို့ အကြောင်းက ဖန်လာတော့.."
:"တကယ်တမ်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်းတွေက လူတွေကို အမျိုးမျိုးစိတ်ဒုက္ခပေး စေတက်လား "
"သူငယ်ချင်းတို့ရေ...တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာမောင်မောင်လို ချစ်တက်တဲ့အသဲနှလုံးမရှိပေမဲ့ "
အလွမ်းမင်းသားလေး သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ခင်မင်လျှက်.....
ဒီပို့လေးကို အပျင်းပြေဖတ်ရန်အတွက် တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ..